Roll Owenza Machine, zophahla Ishidi Machine, umsele wamanzi Ukwenza Machine - Zhongtuo
Cangzhou ZHONGTUO roll ukwakha imishini kuyinto nomkhiqizi professional kanye isithekelisi okuyinto ezikhethekile design, ukuthuthukiswa kanye ukukhiqizwa roll abandayo ukwakha imishini ye. Le nkampani ubambisana izimboni zokukhiqiza eziningana namabhizinisi ezihlobene. Onjiniyela kanye nochwepheshe abacebile isipiliyoni okuklama, ukuthuthukisa, nokukhiqizwa imishini. Thina ukulalelisisa mkhuba omusha ubuchwepheshe. Yonke imikhiqizo uhambisane namazinga izinga international futhi bayaziswa ezimakethe kakhulu emhlabeni wonke. Imikhiqizo yethu zinikelwe emazweni angaphezu kuka-40 ...
Steel Water Downspout Roll Owenza Machine
Square amanzi phansi imvula ipayipi ekwenziweni mshini ...
Stud Track Machine, Hg50 Tube Line , Zophahla Ishidi isichuse Ukwenza Machine, Metal Deck Owenza Imishini , Isinyathelo isichuse Ukwenza Machine , Rolling Ukuvala Door Roll Owenza Ukwenza Imishini ,